Solve the Drive won't Work on Windows | ओएस-स्टोरमा ब्लग
डिसेम्बर 26, 2018 ईकमर्स कम्प्यूटर, इलेक्ट्रनिक्स, ओएस-स्टोरमा, OSGEAR समर्थन, उत्पादन, भण्डारण, प्रविधि 0
Use the troubleshooting instructions below if you install CD, डीभिडी वा ब्लू-रे ड्राइभ कुनै पनि डिस्क पढ्न सक्षम वा कुनै पनि डिस्क पहिचान गर्न असमर्थ छैन.
निर्देशनहरू तपाईंले केही उदाहरणहरू मा समस्या समाधान ड्राइव पूर्ण असफल भएको छ भने मदत गर्नेछ. तल निर्देशनहरू दुवै आन्तरिक र बाह्य लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ सीडी, डीभिडी वा ब्लू-रे ड्राइव तर आधारभूत को केही साना फरक हुन सक्छ. जबकि सीडी-रोम को मुद्दा काम छैन प्रयोगकर्ताहरूको लागि निराशा हुन सक्छ, यो डाटा को हानि हुन सक्छ, सामान्य काम प्रक्रिया अबरोध, र यति मा. सीडी-रोम काम गरिरहेको छैन उपयोगी छ को त्रुटि हटाउन ज्ञान एक बिल्कुल कुनै समय मा त्रुटि समाधान गर्न चाहन्छ भने. दिइएको लेखमा, हामी काम गरिरहेको छैन सीडी-ड्राइभ को मुद्दा समाधान गर्न धेरै समाधान हेर्न पर्छ.
भाग 1: प्रयोग हार्डवेयर र उपकरणहरू ट्रबलसुटर >>>
यो सीडी-ड्राइभको समस्या को छुटकारा प्राप्त गर्न काम गरिरहेको छैन आधारभूत विधि छ. पालना गर्न केही सरल कदम संग, प्रयोगकर्ता हुन सक्छ आफ्नो डीभिडी र सीडी-रोम प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त. यहाँ कदमहरू छन्:
विंडोज प्रमुख ट्याप गर्नुहोस् + यस रन संवाद बक्स खोल्न आर.
नियन्त्रण प्यानल मा, खोज बक्स फेला, र प्रकार 'ट्रबलसुटर', र त्यसपछि 'समस्या निवारण' ट्याप गर्नुहोस्.
तपाईं उपकरण कन्फिगर गर्नुहोस् 'हार्डवेयर र ध्वनि वस्तु अन्तर्गत सूचीबद्ध छ मा क्लिक गर्न छ. प्रयोगकर्ता पुष्टि लागि आफ्नो पासवर्ड टाइप गर्न प्रेरित हुन सक्छ.
यदि यो त्रुटि समाधान गर्दैन, तपाईं अर्को समाधान गर्ने सार्न सक्नुहुन्छ.
भाग 2: सबै भन्दा साधारण कारण तपाईंको डिस्क छुटेको छ >>>
हार्ड ड्राइभ विपरीत एउटा बन्द-द-तखता कम्प्युटर वा बाह्य ड्राइव संग जहाज, तपाईंले खरिद अतिरिक्त हार्ड ड्राइव सधैं स्वरूपण गरिएको र प्रयोग गर्न तयार पठाइएको छैन. सट्टा, तिनीहरूले एक रित्तै राज्य-विचार हुनुहुन्छ अन्त प्रयोगकर्ता तिनीहरूले ड्राइव संग के चाहनुहुन्छ भनेर छ, त्यसैले preformatting वा अन्यथा कारखाना मा ड्राइव परिवर्तन गर्न कुनै लाभ छ. जस्तै, तपाईं आफ्नो सिस्टम मा ड्राइव राख्नु गर्दा, विन्डोज तपाईंले स्वतः ढाँचा र ड्राइभ सूची यो जोडेर सट्टा ड्राइव संग के निर्णय गर्न पर्खन्छ.
चरण 1: सुरु क्लिक > रन. टाइप ” sysdm.CPL ” यो देखाउँछ कि संवाद बाकसमा. ठीक क्लिक गर्नुहोस् र यो एक गर्न ल्याउन गर्नुपर्छ “सिस्टम गुण” संवाद बक्स.
चरण 2: ट्याब जानुहोस् “हार्डवेयर” र क्लिक “उपकरण प्रबन्धक” एक पटक त्यहाँ आफ्नो चालक पत्ता. मेरो भनिन्थ्यो “डीभिडी / सीडी-रोम ड्राइव।” यसलाई आफ्नो सामग्रीहरू देखाउन डबल-क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ अन्तर्गत अर्को उपकरण हुनुपर्छ. मेरो एउटा प्रश्न चिन्ह थियो तर केही अवस्थामा, यो एक उद्गार नाम अर्को बिन्दु हुन सक्छ. मेरो भनिन्थ्यो “AOPEN DUW1608 / ARR” तर आफ्नो गरेको फरक छ भने, ठिक छ.
चरण 3: भर्खरै प्रकट हार्डवेयर डबल-क्लिक गर्नुहोस् “AOPEN DUW1608 / ARR” र यो आफ्नै संवाद बक्स प्रकट हुनेछ छ. को जाने “चालक” ट्याब र चयन “चालक अद्यावधिक…” तलका बटनहरू देखि.
चरण 4: अब, चयन “सूची वा विशिष्ट स्थान बाट स्थापना” र अर्को क्लिक. अर्को बक्समा चयन “खोज छैन. म स्थापना गर्न ड्राइभर चयन गर्नेछ” र फेरि, अर्को क्लिक. एक फरक बक्स आफ्नो चालक लागि उपयुक्त हार्डवेयर संग देखाउने. म यसलाई हालैको थियो विश्वास तल देखि चयन, यसलाई भनिन्छ थियो “सीडी-रोम ड्राइभ [IMAPI सेटिङहरू 1,5].” अर्को क्लिक गर्नुहोस् र यो तपाईं दिन्छ निर्देशनहरू समाप्त.
भाग 3: शायद यो एक खराब डीभिडी कारण >>>
हार्डवेयर ट्याब क्लिक गर्नुहोस्
उपकरण प्रबन्धक क्लिक
ँ एटीए / ATAA नियन्त्रक सम्प्रादाय डबल क्लिक IDE च्यानल
एक उन्नत सेटिङ ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्
उपकरण0वा 1 अति डीएमए हुनुपर्छ (छैन पिओआई) वर्तमान स्थानान्तरण गति हुनुपर्छ अति डीएमए
(यदि छैन) स्थापना रद्द उपकरण ड्राइभ र डीभिडी ड्राइव (मेरो मामला मा अग्रगामी ड्राइभ थियो) – पुन कम्प्युटरमा रिबुट – एक पटक reinstalled रिबुट कम्प्युटर फेरि – दोहोरिने 1 –7दुवै सेटिङहरू फिर्ता गर्न अति छन् र समस्या स्थिर छ फेरि.
Part4: अप्टिकल ड्राइभमा पत्र जिम्मेवारी परिवर्तन >>>
पूर्वनिर्धारित, विन्डोज को सबै संस्करण कुनै पनि स्थानीय मात्रा लागि ती निम्न अर्को उपलब्ध ड्राइव पत्र नियुक्त एउटा अप्टिकल ड्राइभमा. तपाईं पछि थप हार्ड डिस्क स्थापना वा थप मात्रा सिर्जना गर्न आफ्नो ड्राइव repartition भने, ओप्टिकल ड्राइभमा नियुक्त पत्र परिवर्तन हुन सक्छ, जो स्थापित सफ्टवेयर पुरानो पत्र रूपमा अप्टिकल ड्राइभमा पहुँच गर्न प्रयास गर्ने भ्रममा सक्छ.
तपाईंले यो जोगिन सक्छौं “सांगीतिक कुर्सियों” स्वयं कुनै पनि अवस्थित स्थानीय वा नेटवर्क मात्रा लागि ड्राइभ पत्र भन्दा उच्च छ भन्ने ड्राइभ पत्र assigning ओप्टिकल ड्राइव द्वारा अप्टिकल ड्राइभमा पत्र को reassignment. उच्चतम उपलब्ध ड्राइव पत्र Assigning, संग, ओप्टिकल ड्राइभमा कहिल्यै कि ड्राइव पत्र फेरबदल सन्जालको रोक्छ. तपाईं दुई ऑप्टिकल छ भने, तिनीहरूलाई Z नियुक्त: र वाई:. Windows XP मा अप्टिकल ड्राइभमा फरक ड्राइव पत्र नियुक्त गर्न, निम्नानुसार अगाडि बढ्न:
कम्प्युटर व्यवस्थापन प्रदर्शित पत्र जिम्मेवारी ड्राइव
1. कन्ट्रोल प्यानल बाट, प्रशासनिक उपकरण चयन > कम्प्युटर व्यवस्थापन.
2. रूख विस्तार आवश्यक छ यदि भण्डारण शाखा वस्तुहरू देखाउन.
3. डिस्क व्यवस्थापन क्लिक, र तल्लो-दायाँ प्यानमा तपाईंको अप्टिकल ड्राइभमा पत्ता.
4. सन्दर्भ-संवेदनशील मेनु प्रदर्शन गर्न अप्टिकल ड्राइभमा प्रतिमा दायाँ-क्लिक, र ड्राइभ पत्र र पथ संवाद परिवर्तन प्रदर्शन गर्न ड्राइभ पत्र र पथ परिवर्तन मेनु वस्तु चयन.
5. परिवर्तन बटन क्लिक गर्नुहोस् र अप्टिकल ड्राइभमा उपलब्ध ड्राइव पत्र नियुक्त गर्न ड्रप-डाउन सूची प्रयोग.
6. तपाईंको परिवर्तनहरू निस्कन सुरक्षित. तपाईंले परिवर्तनहरू स्वीकार, नयाँ ड्राइभमा पत्र तुरुन्तै प्रभाव लिन्छ.
सांगीतिक ड्राइव अक्षरहरू
तपाईं एउटा अप्टिकल ड्राइभमा ड्राइव पत्र जिम्मेवारी परिवर्तन भने, त्यसैले तुरुन्तै ड्राइभ वा सञ्चालन प्रणाली स्थापना पछि. तपाईं सफ्टवेयर स्थापना गर्न यसको मूल पत्र अन्तर्गत कि ड्राइव प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, कि सफ्टवेयर पछि पुरानो ड्राइव पत्र प्रयोग गरेर ड्राइभ पहुँच गर्न प्रयास गर्नेछ.
Ater कि, आफ्नो चालक ठीक काम गर्नुपर्छ. जानकारी प्राप्त, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
इन्टेल प्रोसेसर ओएस-स्टोरमा samsung प्रविधि शृंखला चालक समर्थन 64-बिट विन्डोज HD ग्राफिक्स HTC nokia उपकरण मोडेल चालक समर्थन मोबाइल फोन कानुनी व्याख्या उपकरण प्रबन्धक सि.पी.यु सार्वजनिक उद्देश्य प्रोसेसर सफ्टवेयर Technology_Internet